Toamasina Ambohipihaonan�ireo Ben�ny tan�na an-tan�n-dehibe
Tanterahina ao Toamasina omaly zoma 5 sy anio sabotsy 6 mey ny fivoriambe fahatelon�ny Fikambanan�ireo Ben�ny tan�na an-tan�n-dehibe eto Madagasikara.
Ny fandaniana ny fitsipika anatin’ny fikambanana sy ny fandinihana ny fandraisana ireo mpikambana vaovao no anisan’ny lahadinika mandritra izao fivoriambe izao. Mety horesahina ihany koa ny fikasana hanolo ho PDS ireo Ben’ny tanàna sasany, toy ny ao Mahajanga sy Toamasina. Re fa ho avy hanokatra ny fivoriana anio ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier. Niforona tamin’ny jona 2016 ny fikambanana ary ahitana mpikambana folo amin’izao, dia ireo Ben’ny tanàna amin’ny renivohi-paritany enina, miampy ny an’i Nosy-Be, Sainte-Marie, Tolagnaro ary Antsirabe. Mety hanatevin-daharana azy ireo ny an’Antalaha, Ambilobe ary Morondava. Manatanteraka fivoriambe in-droa isan-taona ny fikambanana, ka tao Mahajanga ny voalohany ny jona 2016. Ny tanànan’Antsiranana kosa no nampiantrano ny fivoriambe faharoa.